Imigaqo ye-TSA ngokuphathelele kwi-Sikh Turban
ISikh Turban kunye nePhulo loKhuseleko lweZithuthi kwi-Post 9/11
Ukubonakala okwehlukile kweSikh kweendvuvu kunye ne- turban kudla ngokungahambisani nemimiselo yoluntu. Izikolo kunye nee-arhente karhulumente zicelomngeni ngokukhawuleza ukugqoka ii-kakars ezintlanu , amanqaku afanelekileyo enokholo. Ukususela ngoSeptemba 11, 2001 ukuhlaselwa koogqirha be-World Trade Centre, abanye abantu bajonga iikhikh ezimbethe ingubo kunye ne- kirpan , ikrele elincinci, elikrokre. AmaSikh ayenamaxhoba olwaphulo-mthetho lwenzondo e-United States.
Ukuhamba komoya kuye kwaba nzima kunabo bonke abantu, kunye nakwiiSiks ngokukodwa.
Ngo-Oktobha ka-2007 kunye no-2010, uLawulo lwezoThutho loThutho (TSA) lunikeze imimiselo emitsha. Ukuhlolisisa intloko kunye neenkokeli zenkokheli zenkolo ezifana neetanki ziquka ukukhutshwa kwintambo yeThuthi neeThutho zoThutho (TSO) kunye nale nkqubo yokugunyazwa:
Ukukhangela umshini we-Technology Imaging Advanced (AIT) okanye umzimba ogcweleyo.
Wandula ngesandla kwaye ubambe phantsi kwengubo.
Imigaqo ye-TSA kunye neenkqubo zokuhlola kunye neengcebiso kubahambi beSikh zinikwe ngu-Sikh Coalition.
Iinkqubo zokuKhenketwa kweeNqweliso zeMidlalo
Bonke abahambi bayacetyiswa ukuba basuse izicathulo, iingubo kunye neentloko ze-AIT okanye i-body full pat.
Ukususwa kweentloko akusebenzi kubakhenkethi be-Sikh bembethe iinqanki, okanye iinqwelo zentloko zenkolo.
Abahambi beSikh bafanele bacele ukuma kumgca we-Puffer, umatshini ovuthela umoya kwintonga, ngaphandle kokuwuchaphazela, ukuze afune ukufumana imichiza yemichiza, njengombhobho, okanye ezinye iziqhumane.
Amagosa okhuseleko angacela umhambi waseSikh ukuba asuse intonga okanye ezinye iintloko.
Umhambi waseSikh onqwenela ukwenza njalo, makenqabe, kwaye uchaze ukuba intambo yabo, okanye esinye isimbozo sekhanda, inqaku lenkolo.
Abahambi beSikh kufuneka baqiniseke ukuba abanakho izinto zetsimbi, ezifana ne-kirpan (ikrele elifutshane), kumntu wabo.
Ukuba i-alarm detector alarm ishiyiwe, umntu oqhekezayo usebenzisa i-wand wand ukuze azame ukufumanisa umthombo wensimbi.
Ukuba isalathisi sesandla sezwakala kufuphi okanye kufuphi nekhanda labahambahambayo beSikh, i-screener ingathanda ukuyiphonsa phantsi kwengubo, okanye ezinye iintloko.
Ukuba umhambi waseSikh uyazi oko kukubangela i-alamu, into enokuthi inganikezelwa ukuze igweme i-pat.
Ingaba okanye i-alamu ayibangelwa, umhambi waseSikh ogqoke ingubo yinto yokuzenzekela ngokuzenzekelayo ngokubhekisele kwenkcazo engasetyenzisiweyo yesikhululo sekhuseleko kwaye unokukhetha.
Igosa linokukrokrela ityhubhu okanye esinye isimbozo sekhanda esinobukhulu okanye obunzima.
Igosa linokucela ukuba liphose phantsi i-turban okanye enye intloko yenkolo yokuhlolwa kwemichiza.
Umhambi waseSikh ofuna ukufumana igosa eliphambili phantsi kwengubo yalo, kufuneka abonise ukuba bayakuthanda kwaye bazimisele, baphose phantsi kwabo.
Igosa elihlukile liza kuthatha umhambi waseSikh eceleni kwaye lijongise i-pat.
Igosa liza kugubungela izithunywa zeSikh izandla emva kokuba i-pat ephantsi kunye necandelo elincinci lelaphuthini kwaye lifake kumatshini ahlola ukuhlala kwimizi yamachiza.
Igosa liza kubamba ingqungquthela ukuba umhambi waseSikh akachasani, kwaye aqhube ukuhlolwa kweemichiza.
Umhambi waseSikh, ongayichasanga igosa elenza i-pat, ungase ucele indawo yangasese yokuhlola.
Igosa linokucela ukukhutshwa kwengubo, okanye intloko yenkolo, kuphela xa umhambi waseSikh engakwazi ukudlula i-metal detection, okanye emva kokubambisa xa ingxaki ingasombululwanga.
Umhambi we-Sikh unelungelo lokucela indawo yokucoca ngasese nawuphi na uphando olufuna ukususwa kwengubo.
Abahambi baseSikh abaye bahlenga zonke iinkqubo zokuhlola bavumelekile ukuba bahambe ngeenqwelo zabo.
Bika isikhalazo okanye ukuphulwa kwamalungelo oluntu kunye neenkululeko
Iwebhusayithi ye-TSA inikezela ngolwazi oluyimfuneko malunga nokuxhalabisa ngeengxaki zoluntu. AmaFlyers angasebenzisa neFlyright Android Phone AP ukubika ukuphulwa kungekudala xa zivela.
Ukuhlonela iinwele kunye neTurban
Kutheni ukugxininiswa kakhulu kugqoke ingxowa yeSikh?
Zonke iiSiks zinomgaqo wokuziphatha okulindeleke ukuba zilandele. I-Sikh kulindeleke ukuba igcine zonke iinwele zihambelane kwaye intloko ihlanganiswe. Ulawulo lokugqoka isambatho seSikh, yintambo yomntu wakwaSikh. Umfazi waseSikh angayigqoba ingubo okanye ityunte endaweni yokugqoka uhlobo lwe-headcarf yendabuko okanye ngaphandle kwengubo.
Yintoni ebalulekileyo yokugcina iinwele zihlanganiswe?
Ngexesha lokuqalisa ukulandelelana kwe- Khalsa , i-immitorial immortalizing imitrifiti iyafafaza ngqo kwiikes (iinwele). I-Khalsa iqalisa ukuba ii-kes zibe zingcwele emva koko. Akuvunyelwe ukuhlambalaza i-kes. Ubhaptiziwe uAmritdhari Sikh, unemfuneko ecacileyo efunekayo ebandakanya ii-kes ezimele zilandelwe okanye zifake isijeziso kunye nokuzisola.
Kutheni ixhala malunga nokususa intambo?
I-Sikh uziva ehamba ngaphandle kwengubo kwaye ngokuqhelekileyo uyisusa kuphela kwiimeko ezintle kakhulu ezifana nokuhlamba intloko kunye neenwele imihla ngemihla. Ukunyamekelwa nokucocwa kwee-kes kugxininiswe. Emva kokuhlamba ii-kes:
I- kanga , ikhefu lomthi, isetyenziselwa ukuphazamisa ii-kes.
I-kes iphosakele ibe yi- joora , i-knot ekhanda.
I-kanga inceda ukukhusela i-joora kwaye igcinwe ngeenwele ngamaxesha onke.
I-keski, ubude obukhuselayo bendwangu, ibopha intloko ekhanda kwaye inokuthi igutywe ngengubo yombhobho okanye i-chunni.
Kusuka kwimeko ebonakalayo yinto engathandekiyo ukususa ingqungquthela ebantwini:
Izinwele ze-Sikhs, ezingafaki ukuzala, okanye ukuzalwa kwakhona njenge-Khalsa, zinokukhula zize zihlombe, zihlume, zixake, zide okanye zide.
Ingqayi mhlawumbi ibe ngamadidi angama-4-6 ubude okanye idide elide kunye nesiqingatha ukuya kwiiyadi ezi-2 ububanzi.
Ingqumbo ingathatha imizuzu engama-20 okanye ngaphezulu ukubopha, efuna ukusetyenziswa kwezandla zombini, kwaye akuyikuchaphazela umgangatho nanini na ngexesha le nkqubo.
Umvuzo , isicatshulwa esincinci esetyenzisiweyo sokutsala iinqwelo zeenwele kunye nokugqithisa iindwangu zengubo , akunakwenzeka ukuba uvumelekile ukudlula i-check point.
Kutheni amaSiks akhathazeke ngokuba ne-turban echaphazelekayo?
Kuthathwa njengento ehlazolekileyo kumntu ukuba aphule intambo yomnye ngokuyisusa, kwaye angabi nantlonelo xa echaphazelekayo ngezandla ezingahlambulukanga, okanye umntu ongazihloneli kunye nokuthobela imithetho ye- Khalsa, ingakumbi apho kubandakanywa ukusetyenziswa kwecuba.
Okunye malunga neSikh Turbans kunye nohambo
I-GoSikh Online Turban Store
AmaSikhs kunye noMthetho weHikethi yamaHlomelo
I-FAA (i-Federal Aviation Administration) IziKhokelo kunye noBuchule boBuchule
Ngaba iSikhism Tattoos Ivumelekile?
Indlela i-Kirpans enokuhamba ngayo ngeenqwelo zomoya
Kutheni Abanye Abesifazane baseSikh ba neenwele zobuso? Isizathu kunye ne-Treatment FAQ
I-Amritvela Cheat Sheet
Indlela Yokwenza I-Chole (I-Curry Chickpea Curry) I-Recipe Illustrated
Iincwadi eziphezulu eziboniswa ngabantwana ngeSikhism
Uthando kunye no-Romance eSikhism
Isikhokelo sokuThengwa kwamagunya okuThengwa kwamandla
Iindlela zokuzonwabisa zokugubha iSatifikethi sokuzalwa kwabafundi esikolweni
Yintoni i-Word Echo?
Amaseli eSin edibana neNkcazo ezininzi nge-Excel SUMPRODUCT
I-Admissions yeYunivesithi yaseMount
Iingcamango zoBugcisa boBugcisa
Iinkcukacha Ezinxamisekileyo NgeMesopotamiya
Indlela yokwenza i-Sparkler
Isidalwa Sabantu Esifumaneka KwiMicdonald's Factory?
UMgaqo kunye noLawulo kwi-Economics yase-US
Phezulu Madonna Iingoma ze '80s
Iingcaphuno Zokuba Kuthetha Ukuthandana
Ngaba i-Movie 'Impahla' Isekelwe kwiZenzo Zinyani?
I-ESL Direct Objects